Tọhapụrụ mmelite nke atọ nke Ubuntu 18.04.3 LTS | Site na Linux
N'oge izu ụka gara aga Ndi mmadu gha emeputara ngbanwe nke uzo ato nke Ubuntu mbipute 18.04 LTS, na nke a version gụnyere mgbanwe metụtara ịkwalite nkwado ngwaike, Linux kernel melite na eserese eserese, nrụnye ahụhụ installer na bootloader.
Ihe mejupụtara gụnyekwara mmelite dị ugbu a maka ọtụtụ narị nchịkọta metụtara mkpochapu nke ọma na nsogbu ndị na-emetụta nkwụsi ike. N'otu oge ahụ, mmelite yiri nke ahụ na Kubuntu 18.04.3 LTS, Ubuntu Budgie 18.04.3 LTS, Ubuntu MATE 18.04.3 LTS, Lubuntu 18.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 18.04.3 LTS, na Xubuntu 18.04.3 LTS ka ebutere.
Na mgbakwunye na ịhapụ ọhụụ ọhụrụ nke sistemụ ahụ na ndozi ndị dị mkpa, a na-ewepụkwa ụdị mmelite ndị a iji zere onye ọrụ iji budata mmelite dị ukwuu mgbe echichi nke sistemụ.
Ya mere, site na mmelite ohuru a, ndị ọrụ ọhụụ ma ọ bụ ndị na-aga ịtinye usoro ahụ ga-enwe nchịkọta ọhụụ emelitere nke ngwa ngwa.
1 Kedu ihe ọhụrụ na Ubuntu 18.04.3 LTS?
1.1 Budata ma ọ bụ melite na ụdị ọhụrụ nke Ubuntu 18.04.3 LTS
Kedu ihe ọhụrụ na Ubuntu 18.04.3 LTS?
Updatedị mmelite a maka Ubuntu 18.04 LTS gụnyere ụfọdụ ndozi akwadoro kemgbe ịhapụ Ubuntu 19.04, dị ka nke anyị nwere ike ịkọwapụta nke ahụ a na-atụle ya iji melite kernel 5.0 (Ebe ọ bụ na Ubuntu 18.04 hapụ Kernel 4.15 na Ubuntu 18.04.2 - 4.18).
Na nhazi mbipute sava ahụ webatara nkwado maka otu ngalaba nke LVM ezoro ezo na ike iji akụkụ diski dị ugbu a n'oge nrụnye. Akpaka nkwenye nke ụdị ọhụrụ nke ngwa mgbakwunye ngwa mgbakwunye na installer, ọ bụrụ na ọ dị, na-akpali gị ịwụnye mmelite ka emejuputara.
Nakwa maka mbipụta ihe nkesa, a na-agbakwunye kernel ọhụrụ dị ka nhọrọ na installer. Ọ bụ ihe ezi uche dị na iji mgbakọ ọhụrụ naanị maka nrụnye ọhụrụ - sistemụ ndị etinyere na mbụ nwere ike ịnata mgbanwe niile dị na Ubuntu 18.04.3 site na usoro ntinye melite.
Mgbe maka ụdị desktọọpụ, kernel ọhụrụ na eserese eserese na-akwado ya.
Kemgbe Ubuntu 19.04, a kwadoro usoro ohuru nke Livepatch system , nke na-enye mmelite iji wepu ndapụ dị ize ndụ na kernel Linux nke etinyere na sistemụ na-agba ọsọ na-enweghị ịchọrọ ịmalitegharị.
N'aka nke ọzọ, ihe ndị dEjiri emelitere eserese eserese, tinyere ụdị nsụgharị nke mutter 3.28.3 na Mesa 18.2.8, nke a nwalere na Ubuntu 19.04. Agbakwunyere ndị ọkwọ vidiyo ọhụụ maka ibe Intel, AMD na ibe NVIDIA.
Ihe pụtakwara bụ ụdị emelitere nke OpenJDK 11, LLVM 8, Firefox 66.0.4, urukpuru-init 18.5-21, ceph 12.2.11, PostgreSQL 10.7, snapd 2.38, modemmanager 1.10.
Ọ dị mkpa icheta na maka nnyefe nke nsụgharị ọhụrụ nke Kernel na eserese eserese, a na-eji usoro nkwado mmelite na-aga n'ihu, nke a ga-akwado kernels na ndị ọkwọ ụgbọala na-akwado ya ruo mgbe mmelite na-esote nke ngalaba Ubuntu LTS .
Dịka ọmụmaatụ, A ga-akwado kernel Linux 5.0 a chọrọ na ụdị nke ugbu a ruo mgbe ntọhapụ Ubuntu 18.04.4, nke ga-enye kernel Ubuntu 19.10. Isi nke 4.15 nyefere na mbụ ga-akwado ya n'oge usoro mmezi.
Budata ma ọ bụ melite na ụdị ọhụrụ nke Ubuntu 18.04.3 LTS
N'ikpeazụ maka ndị nwere mmasị ibudata ụdị ọhụrụ a nke Ubuntu 18.04.3 LTS Ha nwere ike ịme nke a site na ịga na webụsaịtị gọọmentị nke sistemụ ahụ na n'ime ngalaba nbudata ya ị nwere ike ịchọta njikọ njikọ kwekọrọ maka nbudata.
N'aka nke ọzọ maka ndị nwere Ubuntu gara aga 18.04 LTS i mebeghikwa ihe dị mkpa.
Ha nwere ike ịnyefe ụdị kernel ọhụrụ na eserese eserese naanị na ntinye ha ha ga-emepe ọnụ na sistemụ ha (ị nwere ike ime ya na ụzọ mkpirisi Ctrl Alt T) na n'ime ya ha ga-eme iwu na-esonụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 18.04.3 LTS melite nke atọ wepụtara